पुनः र्मूषिको भव :: उमाशंकर द्विवेदी ‘दिधीचि’ :: पुनः र्मूषिको भव
बुधबार, असार ८, २०७९ उमाशंकर द्विवेदी ‘दिधीचि’
गङ्गाको तीरमा जप, नियम, तप, स्वाध्याय, उपवास आदि योग क्रियामा लागेर पवित्र जल तथा वनका कन्दमूल फल खाई जीउ सुकाइ तपस्यारत केहि ऋषिहरुको परिपूर्ण एउटा आश्रम थियो । त्यस आश्रमका कुलपति याज्ञवलक्य नाम गरेका ऋषि थिए । एक दिन प्रातः कालमा ग·ास्नानपछि देवता तथा पितृहरुलाई आचमन, पाद्य तथा अघ्र्य दिन उद्यत रहेका ऋषिको अंजुलीमा चिल चराले आफ्नो चुच्चोमा च्यापेको एउटा मुसाको बच्चा संयोगवस खस्न पुग्यो ।
ऋषि ध्यान मग्न अवस्थामा रहेको तथा अंजुलीमा सल्बलाइ रहेको कुनै जीवित प्राणीको शिशुको प्राप्तिको आभास पाएर चकित भइ हेर्दा त त्यो जीव मुसाको बच्चा पो रहेको पाए । ऋषिलाई करुणा लागेर हृदय दया प्लावित भएर आयो । पूजा गर्ने बेलामा त्यस मुसाको बच्चालाइ एउटा वटपत्र माथि राखेर पुनः स्नान, आचमन तथा प्रायश्चित गरेर आफ्नो तपोवलले त्यस मुसाको बच्चालाइ सुन्दरी केटीमा परिवर्तित गरि दिए । त्यस पछि त्यस केटीको साथमा उनी आश्रममा फर्कि आएर आफ्नी अपूत्री स्त्रीलाइ दिदै भने–भद्रे ! यस कन्यालाइ लै जाउ तथा यसलाई आफ्नी पुत्री झैं लालन पालन गरेर हुर्काउ । पतिको आदेशानुसार ऋषिपत्नीले यत्नकासाथ ममत्वपूवर्क लालन पालन र स्याहार सुसार गर्दा कन्या छिटै हुर्किएर बा¥ह वर्षे रुपवती तरुणी भइन् ।
विवाहयोग्य आफ्नी रुपवती कन्यालाइ हेरेर एक दिन ऋष्पित्नीले आफ्ना पतिसित भनिन–हे पतिदेव ! आफ्नी कन्या विवाहयोग्य भइ सकेकी छिन, अझै भन्ने हो भने विवाहको समय विति पनि रहेको छ । आफ्नी पत्नीको कुरा सुनेर ऋषिले भने–तिमीले भनेको कुरा ठीकै हो । शास्त्र अनुसार वास्तवमा कन्या बा¥ह वर्षको भएपछि विवाहको लागि कुनै पनि कुराको विचार गर्न आवश्यक पर्दैन । शास्त्रमा स्पष्ट उल्लेख छ– श्रेष्टेभ्यः सदृशेभ्यश्च जघन्येभ्यो रजस्वला । पित्रा देया विनिश्चित्य यतो दोषो न विद्यते । अर्थात् यदि कन्या पितृ गृहमा नै रजस्वला भइ हालिन भने यथाशक्य त्यसभन्दा श्रेष्ट र त्यसको अनुरुप वरसित विवाह गरिदिनु पर्दछ ।
यदि यो सम्भव छैन भने कन्याभन्दा हीन वर सित पनि विवाह गरिदिनु पर्दछ किनकि त्यस्तो अवस्थामा पितालाइ कुनै दोष लाग्दैन । यदि हाम्री कन्या विवाहकोलागि प्रस्तुत हुन्छिन भने म संसारको सर्वश्रेष्ट वर सित विवाह गरिदिन तयार छु । ऋष्पित्नीको सहमति अनुसार ऋषिले वेद मन्त्रद्वारा सूर्य भगवानको आह्वान गरेर भने–मेरी यस शुशीला छोरीसित तपाइ बिहे गर्नुहोस् भन्ने हेतुले तपाइको आह्वान गरेको छु ।
तपाई मेरी छोरीसित बिहे गर्नुहोस् । ऋषिले आफ्नी कन्यासित सोधे–पुत्री ! मैले तिम्रो बिहे भगवान सूर्यसित गरिदिन आ“टे, के तिमीलाइ वर मन परे ? उनकी छोरीले भनिन–बुवा, रुप गुणमा उहाँ अत्यन्त तेजस्वी भए पनि दाहक स्वभावको भएको हुनाले म उहांसित विवाह गर्न चाहन्न । अतः उहाभन्दा पनि कुनै असल वरको जोहो गर्नुस, म त्यससित बिहे गर्ने छु । आफ्नी छोरीको कुरा सुनेर ऋषिले सूर्य भगवानसित सोधे–भगवन, तपाईभन्दा पनि कोहि श्रेष्ट छ भने मलाइ भन्नुस्, आफ्नी छोरीको विवाह म त्यसैसित गर्ने छु । ऋषिको कुरा सुनेर सूर्य भगवानले भने–छन् नि, म भन्दा श्रेष्ट मेघ हुन्छ ।
जसले मेरो तेजलाइ छेेंकेर मलाइ अदृश्य पारि दिन्छ । ऋषिले सूर्य भगवानको कुरा सुनेर मेघलाई बोलाएर छोरीसित सोधे–छोरी, सूर्य भगवान भन्दा श्रेष्ट मेघ हुन्छन् । मेघसित तिम्रो विवाह गरिदिंदा तिमीलाइ मन पर्छ ? छोरीले जवाफ दिइन–बुवा, यो त कालो र मूर्ख छ । यसभन्दा पनि कोहि श्रेष्ट छ भने म उसित बिवाह गर्न मन पराउने छु । छोरीको कुरा सुनेर ऋषिले मेघसित सोधे–मान्वर ! तपाइभन्दा पनि कोहि श्रेष्ट छ भने भन्नुस् । मेघले भन्यो–भगवन, म भन्दा श्रेष्ट हावा हुन्छ जसले मलाइ उडाएर मेरो गतीलाई छिन्न–भिन्न पारि दिन्छ ।
ऋषिले तत्काल वायुलाई आह्वान गरे । वायुदेव उपस्थित भएपछि ऋषिले छोरीसित साधे–वायुदेव वरको रुपमा तिमीलाइ मन परे, छोरी ! यिनीसित तिम्रो विवाह गरि दिउं ? छोरीले जवाफ दिइन–बुवा यिनी त छिनमती र चञ्चल छन, यिनको के ठेकान, कहिले कहां त कहिले कहां ? मलाइ विवाहको निम्ति यिनी मन परेनन् । यिनीभन्दा पनि कोहि श्रेष्ट छन भने म उनीसित विवाह गर्न मन पराउने छु । छोरीको कुरा सुनेर ऋषिले पवन देवसित सोधे–भगवन, तपाइभन्दा पनि कोहि श्रेष्ट छन त ? पवनदेवले जवाफ दिए–किन छैन, ऋषिवर, मभन्दा पनि श्रेष्ट पर्वतराज छन् । जसले मेरो बाटो छेकेर मलाइ निष्क्रिय पारि दिन्छन् ।
पवनदेवको कुरा सुनेर ऋषिले तत्काल पर्वतराजको आह्वान गरे । पर्वत राज उपस्थित भएपछि पुनः उनले छोरीसित सोधे–पवनदेवभन्दा श्रेष्ट पर्वतराज तिमीसित विवाह गर्नकोलागि उपस्थित भएका छन् । वरको रुपमा पर्वतराज तिमीलाइ स्वीकार्य छ, छोरी ? छोरीले जवाफ दिइन–यिनी त कठोर र निश्चल छन् । मलाइ यिनी मन परेनन् । कुनै अर्को श्रेष्ट वरसित विवाह गर्न पाउं । छोरीको कुरा सुनेर ऋषिले पर्वतराजसित सोधे–मान्यवर पर्वतराज, तपाइभन्दा पनि कोहि श्रेष्ट छ र ? पर्वतराजले जवाफ दिए–ऋषिवर, म भन्दा श्रेष्ट मुसाहरु हुन्छन् जसले मेरो जीउलाई कोतरेर दुलो बनाइ त्यसैमा वास गर्दछन् ।
पर्वतराजको कुरा सुनेर ऋषिले मूषकराजलाई बोलाएर उनीसित विवाह गर्न छोरीलाइ आग्रह गर्दा छोरी रोमाञ्चित हुन पुगिन् । लजाउंदै उनी मूषकराजसित विवाह गर्नको लागि आफ्नो स्वीकृति दिइन । मूषकले मान्छेको छोरीसित कसरी विवाह गर्ने ? फसाद प¥यो । तर ऋषिले पुनः आफ्नो तपोवलले त्यस कन्यालाइ मुसो बनाउदै आशिर्वाद दिए–पुनर्मूषिको भव ! कन्या तत्काल मूषिका रुपमा परिवर्तन भइन् तथा मूषकराजसित धूमधामकासाथ उनको विवाह सम्पन्न भयोे । त्यसैले भनिएको छ –सूर्यं भर्तारमुत्सृज्य पर्जन्यं मारुतं गिरिम् । स्वजातिं मूषिका प्राप्ता स्वजातिर्दुृरतिक्रमा ।। (पञ्चतन्त्र कथाबाट)
यसरी मानिसले पनि पाएको अधिकारलाई लत्याउन थाल्यो भने अन्तिममा औकातमा आउनु पर्ने बाध्यता हुन सक्छ । त्यसैले अवसर प्राप्त भयो भने होस् पु¥याएर समयमा नै उचित निर्णग गर्न सक्यो भने राम्रो अवसर पहिले नै आएको पनि हुन सक्छ । होस्ले काम लिनु पर्छ भन्ने यो सन्देश वर्तमानमा पनि उत्तिकै शक्तिशाली छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ८, २०७९ १३:३७